Fomba fampiasana orinasa madinidinika amin'ny media sosialy Martech Zone
Wednesday, May 2, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Mahaliana hatrany ny manamarika fa ny mpivarotra hafa dia manararaotra media sosialy ho tombontsoany manokana. Pagemodo dia namorona infographic on Ahoana no fomba ampiasan'ny mpivarotra ny haino aman-jery sosialy. Ny infographic dia miorina amin'ny fanadihadiana vao haingana ary mampiseho ny tombony fahita indrindra amin'ny fampiasana media sosialy. ao anatin'izany:
Manao ahoana ny lanjan'izany marketing amin'ny media sosialy ho an'ny orinasa kely?
Inona isan-jaton'ny fahazoana orinasa kely amin'ny alàlan'ny media sosialy
Iza ny antony mahatonga ny vokatra betsaka indrindra
Tags: Sary torohaypagemodofandraharahana madinikahaino aman-jery sosialyvalin'ny media sosialy
May 2, 2012 ao amin'ny 5: 28 PM
Ny mahagaga ahy foana dia ny tsy fisian'ny fampiasana Geolocation Apps. Mino aho fa manana lanja lehibe eo amin'ny sehatra antsinjarany izy io, mampiakatra ny hetsika tsy fivadihan'ny mpanjifa. Fantatro fa mbola ambany ihany ny tahan'ny fananganan'anaka amin'ny haavon'ny mpanjifa saingy ho hitantsika fa hiitatra izany amin'ny taona ho avy miaraka amin'ny fiakaran'ny Mobile.
May 2, 2012 ao amin'ny 5: 33 PM
Hevitra tsara, @twitter-281224701:disqus ! Ny mahatsikaiky ao amin'ny fanambaranao dia ny ankamaroan'ireo olona ireo dia mety nahazo tombony tamin'ny fampiharana izay mifototra amin'ny geolocation na dia mihoatra ny fampiharana media sosialy ankapobeny. Tena zava-dehibe ho an'ny orinasa madinika rehetra ny eo an-toerana!
May 2, 2012 ao amin'ny 7: 59 PM
Tsy azoko hoe nahoana amin'ny Google + rehetra no nesorina tao amin'ny “drafitra hampiasaina”.
Tena mihevitra ve ianao fa tsy zava-dehibe sa tsy haka toerana be amin'ny taona manaraka?
May 2, 2012 ao amin'ny 9: 42 PM
@google-3edd56e2ef9c5b26e450ffc79d099b0e:disqus – tsy azoko antoka hoe nahoana no tsy noraharahiana izany, Vane. Saingy heverinay fa zava-dehibe izany, indrindra fa ny Google+ dia manome fandrisihana ho an'ny orinasa mba hampidirana ny maha-mpanoratra sy ny famoahana. Natao laharam-pahamehana miaraka amin'ny mpanjifanay ny fampidirana azy io.
May 3, 2012 ao amin'ny 1: 07 PM
Mahaliana. Izaho koa dia gaga noho ny tsy fisian'ny geolocation fa ity iray ity dia momba ny 'lehilahy lehibe'? Fizarana mahafinaritra, misaotra.
May 7, 2012 amin'ny 10: 28 AM
Mahaliana ihany koa fa najanona ny Google+. Google+ dia tsy tambajotra sosialy fotsiny. Amin'ny maha-vokatra Google azy dia misy fiantraikany amin'ny fikarohana ary tokony hojeren'ny mpivarotra mitady fomba hanatsarana ny fisian'ny milina fikarohana.